लोडसेडिङ हट्यो, तपाईँको अबको लक्ष्य के हो?
लोडसेडिङ हट्यो, तपाईँको अबको लक्ष्य के हो?
कुलमानलाई हाम्रो प्रश्न,
यो वर्ष लक्ष्मीपूजामा काठमाडौं रातभरि उज्यालो भयो। त्यसपछि पोखरा, विराटनगर हुँदै चैत पहिलो सातादेखि देशभरि नै बिजुली नजाने भएको छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अवधिभर देशभरि साँझपख लोडसेडिङ नगर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ परीक्षा सकिएपछि पनि साँझपख देशभरि बिजुली नकाट्ने प्रयासमा आफूहरु लागेको बताउँछन्। जेठको अन्तिमबाट त उद्योगलाई पनि २४ सै घन्टा बिजुली दिइने र त्यसपछि नेपालमा कहिल्यै पनि लोडसेडिङ नहुने घिसिङको विश्वास छ।
घिसिङले सेतोपाटीसँग आफूले अहिले गरिरहेको काम र अाफ्ना मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बिस्तृतमा सुनाए। प्रस्तुत छ घिसिङसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:
त्यसपछि भने यति उत्पादनले मात्र पुग्दैन किनकी जब तपाईँ नियमित र भनेजति बिजुली दिनुहुन्छ, तब माग झनै बढेर जान्छ। त्यसका लागि हामीले दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं, त्यो भनेको मिश्रित स्रोतबाट बिजुली निकाल्ने योजना हो। सबै 'रन अफ दी रिभर प्रोजेक्ट' मात्र बनाएर हुँदैन। यस्ता योजनामा बर्खामा धेरै बिजुली उत्पादल हुन्छ तर हिउँदमा हुन्न। हामीलाई भने हिउँदबर्खै बिजुली चाहिन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा माग भएजति बिजुली दिन जलाशययुक्त आयोजना नै बनाउनु पर्छ।
यी आयोजनामा दुधकोशी, तमोर तामाकोशी–५, मोदी, आँधी खोला माथिल्लो अरुण छन्। यी आयोजनाको निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। यीमध्ये केही निर्माणको चरणमा गइसकेका छन्। केही एक/दुई वर्षमा निर्माण सुरू हुन्छन्। तीन वर्षभित्र यी सबै आयोजनाको निर्माण सुरु भयो भने पाँच वर्षपछि उत्पादन सुरु हुन्छ। मतलब आठ वर्षभित्र यी सबै प्रोजेट सञ्चालनमा आउँछन्। यो बीचमा बढ्ने माग पुरा गर्न निजी क्षेत्रले अहिले तीन हजार मेगावाटको उर्जा खरिद सम्झौता गरिसकेको छ भने, ५ हजार मेगावाट बराबारको उर्जा खरिद सम्झौता हुने क्रममा छ। हरेक वर्ष निजी क्षेत्रले २०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बताएको छ। यसले हरेक वर्ष मागसँगै उत्पादन पनि बढाउँदै लैजान सकिन्छ।
यो अवधिमा हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा 'र्जा ब्यांकिङ' हो। हामीले आउने वर्खामा त भारतबाट बिजुली ल्याउँदैनौ तर अझै एकदुई वर्ष हिउँदमा भारतबाट केही नपुग बिजुली ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ। दुई वर्षपछि बर्खामा भने हामी भारततर्फ बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छौं। 'र्जा ब्यांकिङ’' को नीति अपनायौं भने हामीले हिउँदमा आयात गर्नेभन्दा बर्खामा निर्यात गर्ने बिजुली बढी हुन्छ।
यी सबै कुरा हेर्दा अहिले हामीले धेरै ठूलो फड्को मारिसकेका छैनौं, सानो प्रयास गरेका हौं। तर लोडसेडिङ हट्दा पनि ठूलो काम गरे जस्तो देखियो। अहिले प्राधिकरणप्रति ठूलो विश्वास देखा परेको छ, उर्जा क्षेत्रमा काम गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको छ। अब यही बिश्वासमा टेकेर अरु धेरै काम गर्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ८, २०७३ ११:३५:५८